Taariikhda oo dhan, dadku waxay adeegsadeen calaamadaha iyo astaamaha si ay dadka fikirka noocaas ah uga sheegaan wax, laakiin inay ka qarsadaan kuwa ka baxsan. Tusaale laga soo qaatay qarnigii 1aad waa calaamadda kalluunka ee ay adeegsadaan Masiixiyiintu (ichthys), oo ay si qarsoodi ah u muujiyeen inay xidhiidh la leeyihiin Masiixa. Maaddaama qaar badan oo ka mid ah la silciyey ama xitaa la dilay, waxay ku qabteen shirarkooda dab-damiska iyo meelaha kale ee sirta ah. Si loo calaamadeeyo jidka halkaas, calaamadaha kalluunka waxaa lagu sawiray darbiyada. Tani waxay kicisay shaki la'aan maxaa yeelay masiixiyiintu ma ahayn kii ugu horreeyay ee adeegsada sumadda kalluunka - jaahiliinta ayaa haddaba u adeegsanaysa inay astaan ​​u ahaadaan ilaahyadooda iyo ilaahyadooda.
Sanado badan ka dib markii Muuse soo saaray sharciga (oo ay ku jirto Sabtida) Ilaah wuxuu siiyay sawir cusub oo loogu talagalay dadka oo dhan - dhalashada wiilkiisii ​​jidhkiisa ahaa, Ciise. Injiilka Luukos ayaa sheegaya:
Taasna waxay calaamad u tahay: Waxaad arki doontaa cunugga oo ku duuban xafaayadda oo ku jiifa sariirta. Oo markiiba waxaa ag joogay ciidan fara badan oo jannada la jira malaa'igtii Ilaah ammaaneen oo waxay yidhaahdeen, Ilaah ha ku ammaanmo meelaha ugu sarreeya, nabadgelyada dushiisana dadyowga doonistiisa wanaagsan. (Luukos 2,12-14).
Dhalashada Ciise waa astaan ​​xoog leh, waara, waxkastoo ay ku jiraan dhacdada Masiixa: jidhkiisii, noloshiisii, dhimashadiisii, sarakiciskiisii ​​iyo ubaxnimadiisii ​​badbaadada aadanaha oo dhan. Sida calaamadaha oo dhan, waxay muujineysaa jihada; dib ayey u tusaysaa (wuxuuna ina xusuusinayaa ballanqaadyadii Allah iyo hawlihii u horeeyey) iyo horay (si loo muujiyo wuxuu Ciise ku sameyn doono Ruuxa Quduuska ah). Xusuus qorka Luukos wuxuu ku sii socdaa qayb ka mid ah sheekada Injiilka oo badanaa loo sheego Kirismaska ​​ka dib xilliga Epiphany:
Oo bal eeg, waxaa Yeruusaalem joogay nin la odhan jiray Simecoon. Ninkaasu wuxuu ahaa nin cibaado leh oo cibaado leh, wuxuuna sugayay raaxada reer binu Israa'iil, oo Ruuxa Quduuska ahaana waa la jiray. Oo waxaa Ruuxii Quduuska ahaa u muujiyey inaanu dhimasho arag, maxaa yeelay, isagu hore buu Rabbi Ciise u arkay. Oo wuxuu macbudkii ku yimid niyaddii ruuxa ahayd. Oo markay waalidkii keeneen wiilkii Ciise macbudka ku sameeyey, sidii caadadii sharciga ahayd, ayuu gacantiisa qabtay oo Ilaah ammaanay, oo yidhi, Sayidow, hadda anoo addoonkaaga ah nabad baan ku joogaa. sidaad tidhi; waayo, indhahaygu waxay arkeen Badbaadiyeheenna, oo aad dadka aad hortooda u diyaarsatay, Iftiin si aad u iftiimiso quruumaha iyo qiimaha dadkaaga reer binu Israa'iil. Markaasaa aabbihiis iyo hooyadiis ka yaabeen waxyaalihii lagaga hadlay isaga. Simecoon ayaa u duceeyey iyaga hooyadiis Maryan ku yidhi, Bal eeg, isagu waa dhicid, wuxuuna u istaagi doonaa Israa'iil badan iyo calaamo ka soo horjeedda - oo seef baa naftaada la geli doonta - in kuwa badan oo qalbiguna ku fikiraan in la muujiyo (Luukos 2,25-35).